Shina: Ny fanokana-monina ny Meksikana rehetra · Global Voices teny Malagasy
Shina: Ny fanokana-monina ny Meksikana rehetra
Voadika ny 03 Mey 2009 20:25 GMT
Be loatra angamba ny lahatsoratr'i Michelle Malkin novakian'ny tompon'andraiki-panjakana Shinoa misahana ny fahasalamana tao ho ao; raha nofoanany avokoa ny zotram-piaramanidina avy any Meksika rehetra, ary nahavory Meksikana 41 raha vitsy indrindra tany Beijing, Shanghai ary Guangzhou ny fanjakana, handroaka azy ireo hiala an'i Meksika, nefa fantatra fa tsy hita ho mitondra ny soritr'aretina H1N1 velively izy ireo.
Vao nitatitra ny fivoaran'ny aretina mieli-patrana manerantany moa ny vavahadin-tserasera tahaka an'i Global Times; tao amin'ny tantaran'ny “tsy fahafaliana” nasehon'ny masoivoho Meksikana any Shina, Jorge Guajardo— izay nanolo-kevitra vao haingana izay fa avy any Eorazia no niandohan'ny H1N1 — raha mijery ny fanilihana ny Meksikana, dia nanoratra toy izao ny mpamaky:
Raha misy ny marary, tsy miraharaha ny fahasalaman'ny hafa dia tokony hijaona any an-trano fotsiny izy ary hikarakara ny kisoany, fa tsy mivezivezy manodidina mamindra otrik'aretina. Dia tsy misy ny olona hanasa any, fa tsaratsara kokoa raha tsy mankaty ianao.
Tokony atoka-monina avokoa izay rehetra mampiahiahy noho ny aretina mora mifindra amin'izao endriny izao. Raha misy ny vondrona mampiahiahy dia atoka-monina avokoa izy rehetra. Heveriko fa tsara ny manoka-monina ny zato amin'izy ireo amin'ny habetsaky ny mponina mahatratra 1,3 arivo arivo arivo.
Kay kay kay, aoka izay. Te-hankaty an-tanindrazantsika hanakorontana fotsiny izy ireo, handrebireby ny firenentsika, tena biby mitòrina.
对于对中国如此敌视和不友好的国家，我们为什么要帮它？！ 我们的外交人员究竟是干什么吃的？ 为什么不能把所驻在国对我国的真正的态度反馈回来？ 看来，我们政府这次五百万美元算是白花了。 应该追究我们的外派外交人员的失职！
Nahoana isika no hanampy ireny firenena mankahala sy masiaka amin'i Shina ireny?! Eritrereto fotsiny izay heverin'ny diplaomatintsika amin'izay ataony? Nahoana no tsy lazainy amintsika ny fihevitry ny any ampita momba an'i Shina? Raha jerena avy amin'izao hita izao dia vola fafikatrana fotsiny ny 5 arivo arivo USD. Tokony takiantsika ny fialan'ny mpiasan'ny diplaomasiantsika any ampita!
Hitako ny “tsy fahafalian'ny” diplaomaty Meksikana, saingy tsy misy dikany mihitsy ireny miohatra amin'ny fitandrovana ny ain'ny olona. Niely haingana dia haingana tao anatin'ny andro vitsivitsy monja ny H1N1 hanehoana fa tsy nahomby ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana any amin-dry zareo.
Tifiro any io masoivoho io dia mandraisa iray hafa
Ekeko e, tsy maintsy arovana ny aina sy ny fahasalaman'ny olona e! Angaha hanampy antsika ireo mpanao politika tandrefana ireo raha miely eto amintsika ny valan'aretina? Aza miraharaha azy. Mety tokoa ny mampiato ny zotram-piaramanidina. Tena mety ny nataon'ny fanjakana tamin'ity indray mitoraka ity, ka tohanako amin'ny foko manontolo.
Ny mampody any an-tanindrazany no tena mety, fa tohanako ny manoka-monina azy ireo. Fa raha tsy mety mody ry zareo, inona no hitranga raha miely ny (aretina)? Amin'izay fotoana izao, tsy maintsy eritreretina ny tombotsoan'ny besinimaro. Raha mbola manoka-monina azy ireo isika dia mbola mikarakara azy izany, nefa dia tsy misy fankasitrahana avy amin'izany
Modia any Meksika e!
Misy fotoana iotrehany io valan'aretina io, ary raha mitoka-monina aza ny vahoakantsika, inona moa no tena mba manavaka anao?! inona koa, ny iray aminareo Meksikana no nahitana ny trangan'aretina voalohany! Raha tsy nankaty ianareo dia tokony ho mbola zero ny tranga ahiahiana taty Shina!!!!!
Inona ny fahadisoana raha ny rehetra no arovana? Tsy atao ho zava-dehibe ny fiavian'ny olona amin'ny fotoana tahaka izao. Misy koa ny Shinoa ratsy vintana niray fiaramanidina tamin'ny olona tratran'ny aretina ka natoka-monina ihany koa!! Tsy tratran'ny aretina ianao, sa tsy izay?!
Misy tantara hafa ihany koa ao amin'ny Global Times nosoratana mpiserasera tezitra ka namaly ny fampitandremana nataon'ny Minisitry ny raharaham-bahiny Meksikana mandrisika ny mponina ao aminy tsy hankany Shina; indreto koa ary misy fanehoan-kevitra hafa:
Ry Mpiserasera rehetra: Arahaba.
Misolo tena ny vahoaka Shioa manontolo ve ianao izao? Tahaka ny ahoana moa ny fahalalanao ny zava-misy eto Shina? Mba nahita nanoratra tahaka ny hoe “Minisiteran'ny raharaham-bahiny Meksikana: ‘toroan-kevitra ny mpizaha tany tsy hankany Shina’, romotra ny mpisarasera Shinoa” ve ianao? Mpiserasera aho, fa tsy mbola nahita ny zavatra nolazainareo. Miteny fotsiny aho ry Global Times…………….
Tsy misy antony izay tenenin'ny olona amin'ny fotoam-pahamaizana. Ny fiarovana ny aim-bahoaka ihany no zava-dehibe. Izay no hevitro.
Tao amin'ny NetEase, dia naharay hevitra mihoatra ny arivo ny vaovao mikasika ny fifindran'ny aretina H1N1 avy amin'ny olona mankany amn'ny kisoa nitranga tany Canada andrefana ; ireto no tena niavaka tamin'izay novakiana:
Mahakivy, fa olana amin'ny kisoa izy ity sa amin'ny olona e?
Mihorohoro ny tontolon'ny kisoa “tonga ny gripan'olona”
Mieritreritra aho eto ampamakiana raha mbola miova indray izy rehefa mifndra any amin'ny kisoa. Mikorontana i Canada.
Ah, fahadisoan'ny kisoa ve izany?
Ny manampahaizana manokana miteny fa tsy maintsy manana fifandraisan-dra amin'ilay kisoa ny kisoa hafa matoa tsy tratran'ilay otrik'aretina, izany hoe tsy mazava tahaka izany ry zareo amin'ity resaka ity!
Manavaka ny mpamaky ny NetEase ny mananihany, ireto fanehoan-kevitra manaraka ireto dia maka tahaka ny fomba filazan'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana voasoratra etsy ambony, asongadin'ny iray ary fa tsy mifanalavitra ny karazan'ny H1N1 eo amin'ny olombelona sy ny kisoa:
Misy ifandraisany betsaka ny olona sy ny kisoa! Izany no mahatonga ny roa tonta hifamindra! Moa tsy izany no lazain'ny manam-pahaizana? Sa misy zavatra afenin-dry zareo amin'ny rehetra? Na ny tsy manam-pahaizana amin'ity raharaha ity tahaka ahy aza mahafantatra izany, Nahoana noho izany no tsy lazainao manam-pahaizana manokana ny momba azy ity? Sa misy ny zava-mampatahotra?
Misy ifandraisany ny ran'ny kisoa sy ny ran'ny olona! Izany no mahatonga ny roa tonta hifamindra! Moa tsy izany no lazain'ny manam-pahaizana? Sa misy zavatra afenin-dry zareo amin'ny rehetra? Na ny tsy manam-pahaizana amin'ity raharaha ity tahaka ahy aza mahafantatra izany, Nahoana noho izany no tsy lazainao manam-pahaizana manokana ny momba azy ity? Sa misy ny zava-mampatahotra?
Madity noho ny rano ny ran-kisoa sy ny ran'olona! Izany no mahatonga ny roa tonta hifamindra! Moa tsy izany no lazain'ny manam-pahaizana? Sa misy zavatra afenin-dry zareo amin'ny rehetra? Na ny tsy manam-pahaizana amin'ity raharaha ity tahaka ahy aza mahafantatra izany, Nahoana noho izany no tsy lazainao manam-pahaizana manokana ny momba azy ity? Sa misy ny zava-mampatahotra?
Mpanompon'ny olona ampahibemaso ny kisoa! Izany no mahatonga ny roa tonta hifamindra! Moa tsy izany no lazain'ny manam-pahaizana? Sa misy zavatra afenin-dry zareo amin'ny rehetra? Na ny tsy manam-pahaizana amin'ity raharaha ity tahaka ahy aza mahafantatra izany, Nahoana noho izany no tsy lazainao manam-pahaizana manokana ny momba azy ity? Sa misy ny zava-mampatahotra?
Mikarakara olona ny kisoa! Izany no mahatonga ny roa tonta hifamindra! Moa tsy izany no lazain'ny manam-pahaizana? Sa misy zavatra afenin-dry zareo amin'ny rehetra? Na ny tsy manam-pahaizana amin'ity raharaha ity tahaka ahy aza mahafantatra izany, Nahoana noho izany no tsy lazainao manam-pahaizana manokana ny momba azy ity? Sa misy ny zava-mampatahotra?